Shil gaari oo ka dhacay Soomaaliland | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Shil gaari oo ka dhacay Soomaaliland
Shil gaari oo ka dhacay Soomaaliland
Wararka ka imaanaya deegaan hoostega Magaalada Berbera ee Xarunta Gobolka Saaxil ee Somaliland ayaa waxay sheegayaan inuu halkaas ka dhacay Shil gaari oo geystay khasaaro kala duwan.
Shilkaan ayaa yimid, kadib markii gaari nooca raaxada ah oo ku socday Xawaare uu mar qura ka baxay wadada laamiga ah, xili uu marayay deegaan lagu magacaabo Xamaas oo ka tirsan Magaalada Berbera.
Dad goobjoogayaal aha ayaa warbaahinta gudaha waxaay u sheegeen inay shan qof Gaariga saarnaayeen,waxaana goobta ku geeriyooday hal qof, halka 4 kalena ay dhaawacyo soo gaareen, kuwaasoo la geeyay Isbitaalka Magaalada Berbera.
Dadka waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa gurmad u sameeyay dadka goobta ka Agdhawaa, waxaana Sawirada Gaariga Shilka Galay ay Muujinayaan inuu Burbur Xoogga Soo Gaaray.
Degaano iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliland ayaa waxaa horey uga dhacay shilal kala duwan oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac, iyadoona inta badan shilalka loo sababeeyo Darawalada oo gaadiidka xawaare dheereeya ku wada.
Previous articleDHAGEYSO:Raila oo sheegay in ay musuqmaasuq tahay dhaqaalaha uu madaxweyne ku xigeenka siiyo kaniisadaha
Next articleDHAGEYSO:Puntland oo digniin u dirtay bulshada gobolka Mudug